Shuruudaha Adeegga - Word.to
Word ilaa PDF
PDF ilaa Word
Hoos waxaa ku qoran tarjumaad qallafsan oo ku saabsan shuruudahayaga Ingiriisiga ee adeegga iyo siyaasadda khaaska ah ee Ingiriisiga ee dhinacyada sharciga labadaba waxay ku khuseeyaan oo keliya Ingiriisiga
Asturnaantaada ayaa muhiim noo ah. Waa siyaasada Word.to inay ixtiraamto arimahaaga gaarka ah ee ku saabsan wixii macluumaad ah ee aan kaa soo ururin karno ee ku baahsan degelkeena, https://word.to , iyo bogag kale oo aan iska leenahay oo aan ku shaqeyno.
Kaliya waxaan codsaneynaa macluumaadka shakhsi ahaaneed markaan runti ubaahanahay si aan adeeg kuu siino. Waxaan ku soo aruurineynaa qaab cadaalad iyo xalaal ah, adiga oo aqoontaada iyo ogolaanshahaaga ah. Waxaan sidoo kale kugula socodsiineynaa sababta aan u aruurineyno iyo sida loo isticmaali doono.
Waxaan haynaa oo keliya macluumaadka la soo ururiyey illaa iyo inta lagama maarmaanka u ah inaan ku siino adeegga aad codsatay. Xog intee le'eg ayaan keydineynaa, waxaan ku ilaalin doonnaa qaab ganacsi ahaan la aqbali karo si looga hortago luminta iyo xatooyada, iyo sidoo kale marinka aan la oggolaan, shaacinta, nuqul ka sameynta, adeegsiga ama wax ka beddelka.
Ma la wadaagi doonno macluumaad shaqsi ahaan lagu aqoonsanayo si cad ama cid saddexaad, marka laga reebo markii sharcigu u baahan yahay.
Websaydhadeenu waxay kuxiran kartaa boggaga dibedda ee aan annaga ka hawlgalin. Fadlan la soco inaanan xakameyn karin waxyaabaha ay ka kooban yihiin iyo dhaqamada bogaggan, mana aqbali karno mas'uuliyadda ama mas'uuliyadda siyaasadaha u gaarka ah.
Waxaad xor u tahay inaad diido dalabkeena ku saabsan macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed, iyadoo la fahmayo inaan laga yaabo inaan awoodno inaan ku siino qaar ka mid ah adeegyada aad rabto.
Isticmaalkaaga joogtada ah ee boggayaga internetka waxaa loo tixgelin doonaa inuu yahay aqbalaadda dhaqamadeena ku saabsan asturnaanta iyo macluumaadka shaqsiyeed. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan sida aan u maamulno xogta isticmaaleyaasha iyo macluumaadka shakhsiyeed, si xor ah u nala soo xiriir.
Faylasha la soo galiyay waa la tirtiraa laba saacadood ka dib feylasha la beddelayna waa la tirtiraa 24 saac kadib. Si loo xadido xadgudubka, waxaan galnaa cinwaanka IP-ga ee sameeyay badal markii feyl la badalay, ma jiro wax xiriir ah oo ku saabsan feylasha iyo cinwaanka IP-ga. Hal saac kadib cinwaanka IP-ga waa la tirtiray sidaa darteed way u furan tahay beddel kale.
Nidaamkani wuxuu dhaqan galayaa laga bilaabo 6 Juun 2019.
Ka beddelo Ereyga
Word ilaa JPG
Word ee PNG
Word ilaa Excel
Word ilaa HTML
Word ee PowerPoint
Word ilaa ePub
Word ee JPEG
Word ilaa PPT
Word ilaa PPTX
Word ilaa XLS
Word ilaa XLSX
Word ilaa ICO
Word ilaa BMP
Word oo ku socota SVG
Eray ku socota ZIP
Word si aad ugu dirto
DOC ku samee PDF
DOCX illaa PDF
DOC ilaa JPG
DOCX ilaa JPG
DOC u PNG
DOCX illaa PNG
DOC illaa XLS
DOCX illaa XLS
DOC illaa XLSX
DOCX illaa XLSX
DOC illaa ICO
DOC ilaa BMP
DOC u SVG
DOCX illaa ICO
DOCX illaa BMP
DOCX ilaa SVG
U beddel Word
Ku wareeji Word
PNG ilaa Word
JPEG u dir Word
DOC illaa Word
DOCX ilaa Word
SVG ilaa Word
ICO illaa Word
BMP ilaa Word
Word ilaa DOCX
Word ilaa DOC
DOCX ilaa DOC
DOC ilaa DOCX
PDF ilaa DOC
PDF ilaa DOCX
JPG ilaa DOC
JPG ilaa DOCX
JPEG ilaa DOC
JPEG ilaa DOCX
PNG ilaa DOC
PNG ilaa DOCX
ICO ilaa DOC
ICO ilaa DOCX
BMP ilaa DOC
BMP ilaa DOCX
SVG ilaa DOC
SVG ilaa DOCX
34,014 beddelaad ilaa 2020!
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - Shuruudaha Adeegga - Nala soo xiriir - Nagu saabsan - API
Waxaa sameeyay nadermx - © 2020 Word.to
Waxaad dhaaftay xadka beddelkaaga ee hal saacaddii, waad u rogi kartaa faylashaada gudaha 59:00 ama Saxeex oo hadda badalo.
Noqoshada PRO waxay ku siinaysaa astaamahan
🥇 Xayeysiis la'aan
☝ Beddelaad aan xadidnayn
🥇 Beddelka OCR
🐱 Safka mudnaanta
🚀 Xulashada Codsiga Sifada
☝ Dufcaddii uploading si aad u jiidi karto oo hoos u faylasha badan markiiba halkii halkii mid mid